Ikhalenda Lunar yezinwele zezinwele ezihamba phambili kakhulu ngoDisemba 2015. Izinsuku ezithandekayo zezinwele.
Kunini lapho kuncono ukuthola izinwele ngoDisemba 2015? Amathiphu namasu
Ukuze ugcine ikhanda lezinwele ezinempilo futhi elihlotshiwe kahle, gcina izinwele zakho zinqume isimo esifisayo isikhathi eside ngangokunokwenzeka, futhi futhi ukugwema izinkinga eziningana ezihambisana nokuwohloka kwezingqimba, kunconywa ukuba unake isigaba lapho inyanga ikhona khona ngesikhathi sokuvakasha kwezinwele. Uma uzoya salon ngenyanga yokuqala ebusika, isikhathi esamukelekayo kakhulu siyokusiza ukhethe ikhalenda yethu yenyanga, ekhombisa izinsuku eziphumelele kakhulu ukugcwaliseka kwalolu daba ngenyanga edlule yalonyaka.
Izinsuku ezinzima kunazo zonke zokukhanda izinwele
Disemba 1 - inkanyezi yasebusuku iqala ukwanda futhi i-Aries. Lesi sikhathi asihambisani kakhulu nezinwele zokusika, ngoba kuzoba yize kakhulu ngisho nasezandleni zenkosi enhle. Kodwa ngalolu suku ungakwazi ukudweba ngokuphephile amakhelethi, ikakhulukazi, amapende ngezizathu zemvelo - i-henna noma i-basma.
Uma uthatha isinqumo sokuya kumculi wezinwele ngo-Disemba 7, bese ucabangela iqiniso lokuthi kukhalendeni yenyanga namuhla akudingekile ukuba unqunywe izinwele noma wenze ezinye izinyathelo ze-salon nazo, ngaphandle kwalokho zizolahlekelwa ukukhanya kwazo nokubukeka okunempilo.
Izinombolo ezingu-8 kuya kwezingu-9 - inyanga edlulayo e-Cancer ithembisa ukukhula okuncane kakhulu kwezinwele zezinwele, ngakho-ke kungcono ukunquma izinwele ezimfushane ngosuku olulodwa, futhi akudingekile ukushintsha umbala wezinwele, ngoba ngalesi sikhathi izinwele zibucayi kakhulu.
Kusukela ngoDisemba 15 ukuya ku-16, iNyanga iyaqhubeka ihamba, kodwa kakade eLibra. Ngokwekhalenda yenyanga yezinwele zezinwele zikaDisemba, lezi zinsuku kungcono ukugwema ukuvakashela i-beauty salon.
Ngo-Disemba 22 kufika inyanga entsha eKapricorn futhi lokhu kuyithinta kabi umzimba womuntu ngokujwayelekile. Ngakho-ke, uma kukhona ithuba elinjalo, ukuvakashelwa ku-salon kunconywa ukuthi kuhlehliswe.
Kusukela ngomhla wama-23, inyanga iqala ukukhula eCapricorn, kodwa ingenzi lutho ekubambeni izinwele.
Ngenyanga kaDisemba 24 kuya ku-25 kufanele ilahlwe kusuka kumbala noma ukusika izinwele, ngaphandle kwalokho impilo yakho ingaba yingozi kakhulu.
Izinsuku eziphumelele kakhulu zekhanda
Ngenyanga kaDisemba 2 - lolo suku alithwele umthwalo omkhulu wamandla - ngakho ukuvakashelwa kwezinwele akukwazi ukuhlehliswa kuze kube yilapho.
3 - 4 inyanga ekhulayo i-Taurus, ngakho-ke uzoba nenhlanhla kunoma yimiphi imizamo. Ngakho ungahlela ngokuphepha ukusika izikhalo noma umbala walolu suku.
Ngo-Disemba 5, inyanga idlulela esigodini sikaGemini, futhi u-6 ufika inyanga egcwele kuloluphawu. Izinsuku zibhekwa zingakufaneleki ukunciphisa ubude noma ukukhetha i-hairstyle entsha.
Ngesikhathi sikaDisemba 10 kuya ku-11, ungazama ukukhipha izinwele zakho nomthunzi.
Ngenyanga kaDisemba 12 - 14 - inyanga edlulayo eVirgo izithembisa izinsuku ezinhle kakhulu ukuvakashela izinwele: izinwele zizothola ivolumu, zizobonakala ziphilile futhi zilungele kahle. Imikhawulo yembala ekubalazweni nayo ayikho - ukhululekile ukukhetha noma yikuphi ukunambitheka kwakho futhi ukumangaza wonke umuntu onesithombe esisha.
Uma unquma ukushintsha i-hairstyle yakho ngomhla ka-17 - inyanga edlulayo e-Scorpio ibonisa usuku olungathathi hlangothi, kodwa akufanelekile ukusika noma udaye izinwele zakho ngo-Disemba 18, ikakhulukazi uma ucabanga ukuthi awukwazi ukulinganisa ngokwemibala, imodeli izixazululo nokupakisha.
Ngomhla ka-20 Disemba 2015 usuku oluhle kakhulu lokulinganisa ngobude nokuma kwezinwele, kodwa 21 - akunconywa ukuthinta izinwele.
Ngenyanga kaDisemba 26, inyanga ingena isibonakaliso sePisces - kuyisifiso sokuba nesikhathi sokusika izinwele zakho namuhla, ngoba ikunika imali enamandla yamandla, okungeke kuthiwe kusukela ngoDisemba 27 kuya kuDisemba 29, lapho inyanga ekhulayo e-Aries ingasincoma ukuya kumculi wezinwele.
U-December 30 kuya ku-31 Kunconywa ukuthi ukhokhe ukuvakashela inkosi yakhe, njengoba lezi zinsuku zingenye yezindlela ezifanele kakhulu ukuhleleka okuzinzile, izinwele ezinhle kanye nezinwele ezintsha ezikhanyayo.
Abanye abathandabuzayo bacabanga ukuthi le ndlela yokubheka izinwele ibukeka ngokungangabazi, kodwa okuhlangenwe nakho kwabesifazane abafuna ukukhula izinwele kubonisa okuphambene nalokho. Yiqiniso, ukuthi noma ukulandela ikhalenda yenyanga kuyindaba yomuntu wonke, kodwa kunoma yikuphi, ukuhambisana nale mithetho elula, wena kanye nokukhiya kwakho ngeke kube kubi nakakhulu.
Umugqa omusha wezingubo zabesifazane eGiorgio Armani
"Narcissus rodriges", inkampani
Izitshalo zangaphandle u-davaliya (unyawo lwangaphakathi)
Ungaba kanjani sexy uma ungenayo isibalo esiphelele?
Indlela yokuhlolisisa kahle ubulili
Izitayela zeHholide zezinwele eziphakathi
Ukushintsha umzimba wesifazane ngesikhathi sokukhulelwa
Ukuphatha okuqinile, noma Ukuthi uphambanise izandla
Ingabe indoda iyafaneleka ebuhlotsheni obungathí sina?